I-Romantic Jumieges Abbey Intshabalalo eNormandy
I-Jumieges Abbey Iintsholongwane eNormandy
Enye ye-abbeys eyintandokazi kunye neyona nto ibonakele
I-Jumièges Abbey eNormandy yenye yezona zixhobo ezihle kakhulu, ezithandwayo kunye neengqonge eFransi. Kuphela kwintshona ye-Normandy inkulu yaseRouen kwi-bend ye-Lower Seine, kwidolophana yaseJumièges.
Unomgangatho ongaqhelekanga, ngoko ke tyelela, ukuba unako, xa izandi ezizodwa zihlala zikhala kunye nomoya ukhawuleza emithini. Emva koko unokuyayixabisa iindawo ezikhuphayo ezivulekileyo ezivuleleke kwizulu kunye neendonga ezonakalisiweyo kunye namakholomu ayenayo izakhiwo ezinamandla ezibekwe kwindawo epakini eluhlaza.
Eyona ncinane yeMbali
Ngenye yezona zikhulu zeBenedictine zaseFransi, iJumièges yasungulwa ngo-654 nguSt. Philibert kwaye kwiminyaka engama-50 yayingamakhulu angama-700 kunye nabazalwana abangama-1,500. I-Abbey yayisisityebi. Ngokungaqinisekiyo, iziko elinjalo elinotyebi lijolise kwaye iJumièges yahlaselwa rhoqo ngabahlaseli beViking phakathi kuka-841 no-940.
Ebuyiselwe kwinkulungwane ye-11 kwaye yahlanjululwa phambi koWilliam uMnqobi ngo- 1067, yaphinda ibe yityebi kwaye inamandla, kunye neziko elithile leengqondo eliyaziwayo kwi-Scriptorium yalo apho oonogxa basebenze kwimibhalo yabo yeminwe elukhanyisayo.
Ukutshabalaliswa kwafika ngeMfazwe yeNkolo (1562-98) phakathi kwamaKatolika kunye namaProtestanti kwaye ngoko yi-Revolution yesiFrentshi eyathetha ngokugqibeleleyo ukuphela kwe-Abbey. Ngomnyaka we-1793 i-abbey yayithengiswa kwintengiso kumthengisi weemithi owayefuna ngamatye ayo. I-chancel ne-lantern-tower yavuthwa kwaye ilandelwa ngokutsha.
Ngomnyaka we-1852 kwasindiswa yintsapho yaseLepel-Cointet eyakha kabusha indawo yokungena kwaye yahlalisa ipaki ngaphambi kokuyithengisa kuRhulumente ngo-1946.
Thatha iphepha elincinci ekungeneni ekukhokeleni kumanxuwa, okanye uthathe i-iPad ukuxhuma kwi-app yokufundisa. Ngale ndlela unokuhamba ngeendlela ezibonakala ngathi zakhiwo zangaphambili.
Uya kufumana ukuba lula, isantya sakho sinciphisa njengoko uthatha kwizinga likaJumièges Abbey elinye lamabhabha am phezulu eFransi.
Uqala kwindawo yokulungisa kwakhona. Hamba ngebhokisi le-14 leminyaka kunye nekhohlo lwakho ubona ibandla laseTou-Dame. Yakhelwe kwinqanaba elimangalisayo kunye neenqaba ezili-46 (150 inyawo) eziphakamileyo kunye neemitha ezingama-88 (88 feet) neve ephezulu. Awukwazi ukungena ngaphakathi ukuhamba ngakwesokunene sakho, udlule i-hospice endala apho iindwendwe ezicebileyo kunye ezibalulekileyo zahlala kwindawo encinane yeSonto-Saint-Pierre. Bese uqhubeke nokujikeleza emva kwecawa elikhulu le-Notre-Dame okanye uhambe uhambe epakini ukuya kwindawo encinci yokujonga umgangatho ophezulu.
Inombolo: 00 33 (0) 2 35 37 24 02
Ephakathi kuka-Epreli ukuya phakathi kukaSeptemba imihla ngemihla nge-9: 30 ekuseni ngo-6: 30pm
Phakathi kukaSeptemba ukuya kuMbasa-Ephreli 9: 30 ekuseni ukuya ku-2: 30-5: 30pm
Abadala 5 i-euro, abaneminyaka eyi-18-25 ubudala abanama-3.50 zama-euro, abakhululekile kuma-18s
I-Jumièges i-Boucles de la Seine Normandy Park Park. Iikhilomitha ezingama-165 (102.5 miles) ngasentla ngasentshonalanga yeParis, kwi-D143 ephakathi kwe-D982, kunye neekhilomitha ezingama-25 (15.5 miles) ngasentshona kweRouen.
Kuphi ukutya kwiJumièges
Inombolo: 00 33 (0) 2 35 37 24 05
Ekunene nxamnye ne-Abbey ne-summer trarace, i-chef chef / umnini-mali uLoic uHenry usebenzisa umkhiqizo wonyaka wexesha.
Uhlala phi eJumièges
Inombolo: 00 33 (0) 2 35 33 96 96
Ihotele yaseNormandy yesiqingatha esinesigxina kunye neeklasi eziqhelekileyo kunye neendawo zokuhlaziya zangaphandle.
Iziqithi zaseFrance zaseNude naseNaturist Resorts
Iindawo ezinika umdla zotyelelo e Cannes, iChick Riviera City
Iingcebiso eziBhozo ezinzulu zohambo lweentsapho eFransi
Iiferi eFransi - Ukuya eFransi ngeFerry evela e-UK
I-Cap d'Agde, isiXeko esiPhukileyo
Iindawo ezili-11 zezoKhenketho eTamil Nadu
Imikhosi Yokutya Eyona Mhle eSt. Louis
Imithendeleko yeSeptemba kunye neMicimbi e-Italy
I-8 Enqwelomoya yeCompress Compression Socks Yokuthenga ngo-2018
Yintoni ukuhlaselwa okanye ukuphinda?
Iintlanganiso ezili-10 eziphezulu zaseKenya
U-Eva Unyaka Omtsha eCopenhagen, Denmark
I-Northeast Ohio Izaphulelo kwabemi abadala kunye nabaveleli
Kuphi ukujonga abaDumi kwi-Broadway
Iimveliso eziMnandi kunye neeViniyards ezikufutshane neHouston
Ngaphandle kweBrunch: Izinto eziyingqayizivele ezenzelwe uMhla woMama kwi-LA
5 Iimveliso zokuziTya eziPhezulu ezizimeleyo eMontreal
I-Santa Cruz County Yamanzi amaLwandle
Pinkberry vs. Mango Mango